Imveliso yevidiyo yenye yezo ndlela zokuthengisa zihlala ziphantsi komgangatho xa kuziwa kwi-ROI. Ividiyo enyanzelekileyo inokubonelela ngegunya kunye nokunyaniseka okuyenza ibrend yakho kwaye ityhalele ithemba lakho kwisigqibo sokuthenga. Nazi ezinye izibalo ezintle ezinxulumene nevidiyo:
I-infographic ikwathetha ukuhanjiswa kwevidiyo yakho ukwandisa ifuthe layo. Ndiyathanda ukuba babelane nge-imeyile kunye nokusayinwa kwe-imeyile njengeendawo ezilungileyo zokuphucula ividiyo yakho. Omnye umthombo wokuhambisa ochukunyiswe kancinci nguYouTube kunye nenjini yokukhangela. Ungalibali ukuba zimbini iindlela ezinokuthi zichaphazele ukukhangela xa uthengisa ngevidiyo: